भलिबलको उपाधि पातारासी र तातोपानीको पोल्टामा – Khaspatra
प्रेस सेन्टर नेपालको कर्णाली अध्यक्षमा शर्मा
मुख्यमन्त्री शाहीले पाए विश्वासको मत
जुम्लामा बस दुर्घटना, दुईको घटनास्थलमै मृत्यु
कुरीतिविरुद्ध जुर्मुराउँदै पातारासी
मंसिर २१ र २२ गते काठमाण्डौँमा गर्जदै गजेन्द्र
कार्मा बुढाको राजनीति यात्रा : विद्यार्थी राजनीति देखि जुम्ला काँग्रस उपसभापति सम्म
तिला गाउँपालिकाका ९ वडाका ३२ बस्ती छुइगोठ मुक्त
सिँजा सभ्यता विधेयक इतिहास बचाउने अस्त्र
सुर्य डाँगीको जन्मदिनमा बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री
सम्मानजनक सहभागितासहित माओवादी सरकारमा जाने
अपांङ्गता पुर्नस्थापन प्लेटफर्मको अध्यक्षमा धिताल
विद्युतगृहमा समस्या आउँदा चार गाउँ अन्धकार
भलिबलको उपाधि पातारासी र तातोपानीको पोल्टामा
खसपत्र । २ मंसिर २०७८, बिहीबार ०८:४९
जिल्ला खेलकुद समिति जुम्लाले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको महिला तर्फको उपाधि तातोपानी र पुरुष तर्फको उपाधि तातोपानी गाउँपालिकाले जितेको छ । पुरुषतर्फको खेलमा तिला गाउँपालिकाको टिमलाई पराजित गर्दै पातारासी गाउँपालिका बिजय भएको हो । दुइ दुइ सेट बराबरी भएपनि पाँचौ हाफ सेटमा पातारासीले दुइ अंकले तिलालाई पातारासीले जितेको थियो । महिला तर्फको खेलमा गुठिचौर गाउँपालिकालाई पराजित गर्दै तातोपानीले बिजय प्राप्त गरेको हो । लगातार तीन सेटले तातोपानी गाउँपालिकाको महिला टिमले जित हात पारेको हो ।
यही कार्तिक २५ गते देखी गुठिचौर गाउँपालिका को वडा नम्वर ५ झारज्वालाको त्रिभुवन माविमा जिल्लास्तरीय महिला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता शुरु भएको थियो । कर्णाली प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री कपका लागि खेलाडी छनौट गर्न जिल्लास्तरीय भलिबल आयोजना गरिएको जिल्ला खेलकुद समिति जुम्लाका सदस्य सचिव संगिता आचार्यले जानकारी दिइन ।
उनका अनुसार जिल्लाका ८ स्थानीयतह मध्ये ६ स्थानीयतहले पुरुष भलिबलमा सहभागिता जनाएका थिए । चार स्थानीयतहले महिला भलिबलमा सहभागिता जनाएका थिए । चन्दननाथ नगरपालिका र सिँजा गाउँपालिकाले दुबै खेलमा भाग लिएका थिएनन । प्रतियोगितामा सहभागि सबै स्थानीयतहको टिमबाट उत्कृष्ठ खेलाडी छनौट गरेर प्रदेशस्तरीय खेलकुदमा पठाइने उनले बताइन ।
प्रतियोगितामा बिजेता टिमलाइ ५० हजार रुपैयाँ, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । उपबिजेता टिमलाई ३५ हजार रुपैयाँ,मेडल र प्रमाणपत्र दिइएको हो ।
यस्तै खेल अवधिभर सर्वाेउत्कृष्ट खेल प्रदेशन गर्ने पूरुष तर्फ पातारासीका हर्क बुढा महिला तर्फ तातोपानी गाउँपालिकाका देवकी देवकोटालाइ प्रमाण पत्र सहित सम्मान गरिएको थियो । आयोजक जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहेकोमा सहआयोजक गुठिचौर गाउँपालिका बनेको थियो ।
गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरीबहादुर भण्डारीले स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मुल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना भएको बताए । उनले खेल क्षेत्रबाट जुम्लाको नाम उचो बनाउने हिसावले खेलकुदलाई प्रवद्र्धन कार्यमा सहयोग गरेको बताए । उनले भने,‘लामो समय कोभिडका कारण खेलकुद क्षेत्र थलिएको थियो । बल्ल सामान्य बन्दैछ । अब खेलाडीलाई प्रोत्साहन र खेलकुद क्षेत्रको उत्थानका जुट्नु पर्ने देखिएको छ ।’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष धनकृष्ण पाण्डे ग्रामिण क्षेत्रमा खेलकुदको उत्थान हुन नसकेको बताए । उनले भने,‘गाउँगाउँमा भलिबलका प्रतिभावान खेलाडी छन । तर खेलाडीलाई हौसला दिन सकिएको छैन । खेलकुदको प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छैन । अबका दिनमा खेलक्षेत्रलाई परिणाम मुखी बनाउनु पर्ने बेला आएको छ । ’
गाउँगाउँमा खेलकुदका क्रियाकलाप गर्न खेलकुद समिति तयार रहेकोमा जोड दिए ।
अब राम्रा अनुशासित र उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरेर मुख्यमन्त्री कपमा सहभागिता जनाउनको लागि एक महिनाको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने तयारी हुनेछ ।
सहमतीय नेतृत्व छनौट गर्न जुम्ला काँग्रेसमा दबाव
२ मंसिर २०७८, बिहीबार ०८:४९
नेपाली काँग्रस जुम्लाका नेता कार्यकर्ताले सहमतीय नेतृत्व छनौट गर्नको लागि दबाव दिएका छन । उनीहरुले स्वस्थ प्रतिष्प्रर्धाका नाममा पाटी भित्र चुनाव गरी तिक्तता नबढाउनको लागि आग्रह गरेका छन । अहिले स्थानीयतह र आम चुनाव नजिकिदै गइरहेको छ । पार्टी भित्र निर्वाचन गरेर माहोल धुमिल बनाउनु हुदैन । एक भएर सहमति […]
१० आश्विन २०७७, शनिबार ०६:१०
टोलमै पुगेर विद्यार्थी पढाउँदै सामुदायिक विद्यालय
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०७:३९
दुवै डोज खोप लगाएपछि मास्कबाट मुक्ति ! यस्तो छ, वैज्ञानिक कारण
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार १७:१५
कर्णालीको पहिचान झल्काउने लाम्रा संवाद
२० माघ २०७७, मंगलवार २१:१२
प्रहरीलाई सय रुपैयाँ दिन खाेज्ने सुर्खेत प्रहरी हिरासतमा
१३ कार्तिक २०७८, शनिबार १३:२७
बाढीले सबैभन्दा बढि कृषि क्षेत्र प्रभावित
१० आश्विन २०७७, शनिबार ०६:११
कोरोनाले विश्वमा ९ लाख ८० हजारको मृत्यु
मार्सी मिडिया प्रा.लि
चन्दननाथनगरपालिका २ जुम्ला
सूचना विभाग दर्ता नं.: २३३९/०७७-७८
अध्यक्ष तथा सम्पादक: धनबहादुर बुढा
फोन नं.: ९८४८३३५७४७, ९८५८३२२५४७
Copyright All right reserved Marsi Media Pvt Ltd. ::::	Design By: Aarush Creation